महिलाले पुरुषको के कस्ता कुराहरुमा ध्यान राख्छन् Nepalpatra महिलाले पुरुषको के कस्ता कुराहरुमा ध्यान राख्छन्
६ फाल्गुन २०७६, मंगलबार
महिलाले पुरुषको के कस्ता कुराहरुमा ध्यान राख्छन् ! अधिकांश महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाहमा आम पुरुषभन्दा बढी चासो राख्छन् । महिलाहरु पनि यस्ता पुरुषहरु मन पराउँछन् जो फिट र स्वस्थ रहन्छन् । यसका लागि पुरुषहरुले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु जरुरत हुन्छ । मनोवैज्ञानिकका अनुसार महिलाहरु पुरुषको यी कुरामाथि विशेष ध्यान राख्छन् ।
अधिकांश महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाहमा आम पुरुषभन्दा बढी चासो राख्छन् । महिलाहरु पनि यस्ता पुरुषहरु मन पराउँछन् जो फिट र स्वस्थ रहन्छन् । यसका लागि पुरुषहरुले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु जरुरत हुन्छ ।
१. सरसफाई र कपडा लगाउने तरिका
सामान्यतया महिलाहरु यस्ता पुरुषहरुलाई ध्यान दिन्छन् जो दिनहुँ नुहाउँछन् । महिलाले पूरुषको कपडा लाउने तरिकाको ख्याल राख्ने गर्दछन् । उसले कस्तो त कुन पेन्टमा कस्तो टिर्सट कस्तो टिर्सटमा कुन पेन्ट आदी कुराहरुमा निकै ख्याल राख्ने गर्दछन् । त्यसैले पुरुष मित्रहरुले कपडा लगाँउदा विचार गर्नुहोला ।
२. अनुहार र मुस्कान
महिलाहरु पुरुषको अनुहार सफा भएको मन पराउँछन् । उनीहरु कुनै दाग नभएको तथा डण्डीफोर, चाँयापोतो भएको मन पराउँदैनन् । महिलाको एउटै मुस्कान पनि कुनै पुरुषलाई आर्कषक गर्न काफी हुन्छ र पुरुषको मुस्कानले गर्दा महिलाको सोचाई र हेर्ने नजर पनि सकारात्मक हुन्छ । महिलाहरु सफा तथा चमकदार दाँतका साथै राम्रो मुस्कान भएको पुरुषहरु मन पराउँछन् । साथै पूरुषको अनुहारमा मुस्कान छ भने महिलालाई पनि सहज महशुस हुने हुदाँ पुरुष महिलाको अगाडी मुस्कुराउनु आवश्यक हुन्छ ।
महिलाले पुरुषको ख्याल गर्ने भनेको अर्को कुरा हो आखाँ पनि भनिन्छ, आखाँबाट नै कतिपय धेरै कुराहरु थाहा पाउन सकिन्छ । आखाँ देखेर नै साचो र झुठो कुराहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ । एक अनुसन्धानको अनुसार लगभग ७० प्रतिशत महिलाहरु पुरुषको आखाँमा ध्यान दिने गर्दछन् ।
महिलाहरु लामो, बाक्लो तथा सिल्की कपाल भएका पुरुषहरु मन पराउँछन् । पक्कै पनि महिलाको लामो र बाक्लो कपाल पुरुषहरुलाई निकै मनपर्छ र सर्वप्रथम कपालबाट नै पुरुष महिलातर्फ आकर्षित हुने गर्दछन् । तर महिलाले चाही पुरुषहरुको लामो कपाल मन पराउदैनन् । त्यसैले यदि कपाल पालीहाले पनि आफनो अनुहारलाई सुहाउने किसिमले पाल्नुहोस् किन कि तपाईंको कपाललाई पनि महिला मित्रले निकै नै ख्याल राख्ने गर्दछन् ।
५. शरीर र वजन
इस्टामिना बढी भएका जो काम फुर्तिसँग गर्न सक्छ, महिलाहरु त्यस्ता पुरुषहरु मन पराउँछन् । महिलाले पुरुषको वजनमा पनि धेरै नै चासो राख्ने गर्दछन् । धेरै पातलो पनि हैन र धेरै मोटो पनि हैन उनीहरु पुरुष ठिक्क किसिमको जे लगाउदा पनि फिट हुने खालको शरिर भएको पुरुषलाई मन पराउछन् र वजमा पनि विशेष ख्याल राख्ने गर्दछन् ।
पुरुषलाई आकर्षित गर्न महिलाले सुधार्नुपर्ने १० बानी व्यवहारहरु
सुखी हुन र सफल हुन यसो गर्नुहोस्